1 Korintofo 14 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Ndebele Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
1 Korintofo 14:1-40
14 Monhwehwɛ ɔdɔ, nanso monkɔ so nhwehwɛ honhom fam akyɛde+ no denneennen, na sɛ ɛbɛyɛ yiye a, monhyɛ nkɔm.+ 2 Nea ɔka kasa foforo bi no nka nkyerɛ nnipa na mmom ɔka kyerɛ Onyankopɔn, efisɛ obiara nte,+ na mmom ɔnam honhom no so ka ahintasɛm kronkron.+ 3 Nanso nea ɔhyɛ nkɔm de ne kasa hyɛ nnipa den,+ ɔde hyɛ wɔn nkuran, na ɔkyekye wɔn werɛ. 4 Nea ɔka kasa foforo bi no hyɛ n’ankasa ho den, na nea ɔhyɛ nkɔm no hyɛ asafo no den. 5 Minyae a, anka mo nyinaa ka kasa foforo,+ nanso mɛpɛ sɛ mohyɛ nkɔm+ mmom. Nokwarem no, nea ɔhyɛ nkɔm no kyɛn nea ɔka kasa foforo,+ gye sɛ ebia ɔkyerɛ ase na ahyɛ asafo no den. 6 Nanso anuanom, seesei sɛ meba na mebɛka kasa foforo kyerɛ mo na mankasa ankyerɛ mo adiyi+ anaa nimdeɛ+ anaa nkɔmhyɛ anaa ɔkyerɛkyerɛ mu a, mfaso bɛn na mubenya afi me hɔ? 7 Sɛnea ɛte no, nneɛma a nkwa nnim wɔ nnyigyei+ bi, sɛ́ ɛyɛ abɛn anaa sanku; nanso sɛ nsonsonoe biara amma nnyigyei no mu a, ɛbɛyɛ dɛn na wobehu nea wɔrebɔ wɔ abɛn anaa sanku no so? 8 Nokwarem no, sɛ torobɛnto no annyigye yiye a, hena na obesiesie ne ho akɔ ko?+ 9 Saa ara na sɛ mo nso moamfa tɛkrɛma no anka asɛm a emu da hɔ pefee+ a, ɛbɛyɛ dɛn na obi behu nea moreka? Ɛbɛyɛ sɛ morekasa agu mframa mu kwa.+ 10 Kasa horow pii na ebia ɛwɔ wiase, nanso emu biara nni hɔ a enni nea ɛkyerɛ. 11 Enti sɛ mente kasa no ase a, nea ɔrekasa no bebu me ɔnanani,+ na me nso mebu nea ɔrekasa no ɔnanani. 12 Saa ara na mo nso esiane sɛ mopɛ honhom akyɛde+ denneennen nti, mommɔ mmɔden sɛ mubenya ma abu so na asafo no anya nkɔso.+ 13 Enti ma nea ɔka kasa foforo no mmɔ mpae sɛ obetumi akyerɛ ase.+ 14 Na sɛ mede kasa foforo bi bɔ mpae a, ɛyɛ me honhom akyɛde na ɛbɔ mpae+ no, na m’adwene de, ɛnsow aba. 15 Ɛnde dɛn na menyɛ? Mede honhom akyɛde no bɛbɔ mpae, na mede m’adwene nso bɛbɔ mpae. Mede honhom akyɛde no bɛto dwom,+ na mede m’adwene nso bɛto dwom.+ 16 Anyɛ saa na wode honhom akyɛde no yi ayɛ a, ɛbɛyɛ dɛn na ɔfoforo a ɔte hɔ bi no begye w’aseda no so sɛ “Amen,”+ bere a onnim nea woreka no? 17 Ɛwom, woda ase yiye, nanso ɛnhyɛ ɔfoforo den.+ 18 Meda Onyankopɔn ase sɛ meka kasa horow pii sen mo nyinaa.+ 19 Nanso asafo no mu de, anka mɛpɛ sɛ mede m’adwene bɛka nsɛm anum na ama matumi akyerɛkyerɛ afoforo sen sɛ mɛka nsɛm mpem du wɔ kasa bi mu.+ 20 Anuanom, monnyɛ nsɛm ho ntease mu mmofra,+ na mmom monyɛ bɔne mu nkokoaa;+ ne nyinaa mu no, monyɛ nnipa a wɔanyin nsɛm ho ntease mu.+ 21 Wɔakyerɛw wɔ Mmara no mu sɛ: “‘Mede ananafo tɛkrɛma ne ahɔho ano+ bɛkasa akyerɛ ɔman yi,+ nanso ɛno mpo wɔrentie me,’ Yehowa na ose.”+ 22 Enti kasa horow yɛ sɛnkyerɛnne+ ma wɔn a wonnye nni, ɛnyɛ gyidifo,+ na nkɔmhyɛ de, ɛyɛ gyidifo dea, ɛnyɛ wɔn a wonnye nni.+ 23 Enti sɛ asafo mũ no nyinaa behyia faako na wɔn nyinaa ka kasa horow,+ na nnipa foforo anaasɛ wɔn a wonnye nni ba bi a, so wɔrenka sɛ moabobɔ dam? 24 Nanso sɛ mo nyinaa hyɛ nkɔm na obi a onnye nni anaasɛ onipa foforo ba bi a, wɔn nyinaa yi no ntɛn,+ na wɔn nyinaa hwehwɛ ne mu hwɛ; 25 ne komam ahintasɛm da adi,+ na ɔde n’anim butuw fam som Onyankopɔn ka sɛ: “Onyankopɔn wɔ mo mu ampa.”+ 26 Ɛnde anuanom, dɛn na mobɛyɛ? Sɛ muhyiam a, obi wɔ dwom, obi wɔ nkyerɛkyerɛ, obi wɔ adiyi, obi wɔ kasa foforo, na obi nso wɔ nkyerɛase.+ Momma biribiara nyɛ nea ɛhyɛ den.+ 27 Na sɛ obi bɛka kasa foforo a, momma ɛnyɛ nnipa baanu, anaa aboro so koraa baasa, na wɔnka no nnidiso nnidiso; na momma obi nkyerɛ ase.+ 28 Na nea ɔbɛkyerɛ ase nni hɔ a, momma ommua n’ano wɔ asafo no mu, na ɔnkasa nkyerɛ ne ho+ ne Onyankopɔn. 29 Bio nso momma adiyifo+ baanu anaa baasa nkasa, na wɔn a aka no nhu nea ɛkyerɛ.+ 30 Nanso sɛ obi foforo te hɔ na onya adiyi+ a, momma nea odi kan no mmua n’ano. 31 Na mo nyinaa betumi ahyɛ nkɔm+ mmiako mmiako, na obiara asua, na ahyɛ obiara nkuran.+ 32 Na adiyifo no na wodi adiyifo honhom akyɛde no so. 33 Na Onyankopɔn nyɛ sakasaka Nyankopɔn,+ na mmom asomdwoe Nyankopɔn.+ Sɛnea ɛte wɔ akronkronfo asafo nyinaa mu no, 34 momma mmea mmua wɔn ano+ wɔ asafo no mu, efisɛ hokwan nni hɔ sɛ wɔkasa, na mmom momma wɔmmrɛ wɔn ho ase,+ sɛnea Mmara+ no nso ka no. 35 Enti sɛ wɔpɛ sɛ wosua biribi a, wommisa wɔn ankasa wɔn kununom wɔ fie, efisɛ ɛyɛ aniwu+ sɛ ɔbea bɛkasa wɔ asafo no mu. 36 Adɛn? Mo mu na Onyankopɔn asɛm no fi bae,+ anaasɛ mo nkutoo so na ɛsõ? 37 Sɛ obi susuw sɛ ɔyɛ odiyifo anaa ɔwɔ honhom akyɛde a, ma onnye nea merekyerɛw mo yi ntom efisɛ ɛyɛ Awurade ahyɛde.+ 38 Na sɛ obi nso nnim a, onnim ara. 39 Ne saa nti, me nuanom, monkɔ so nhwehwɛ nkɔmhyɛ denneennen,+ nanso ɛnsɛ sɛ mobara kasa foforo.+ 40 Na mmom momma biribiara nkɔ so fɛfɛɛfɛ a nhyehyɛe da ho.+
1 Korintofo 14